FAMPAHALALANA SY SARY AVY AMIN'NY ALIKA WHOODLE DOG, DOGS WHEATEN TERRIER / POODLE HYBRID - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Whoodle, Wheaten Terrier / Poodle Hybrid Dogs
Alika mifangaro varimbazaha mifangaro mifono malefaka mifono vy
Angus the Whoodle (antsoina koa hoe Swheat-n-Poo) amin'ny 1 taona— 'Angus dia Whoodle avy any North Carolina Whoodles. Izy no Whoodle faharoa antsika, ary tsy mizaha tavan'olona tanteraka izahay, fa mihevitra izahay fa Whoodles no alika TSARA. Tsy ampiasaina amin'ny fiompiana izy. Izy ihany no biby fiompin'ny fianakavianay. Ankafizinay tanteraka ity alika ity, ary mieritreritra izahay fa izy dia ohatra tsara ho an'ity endrika mpamorona ity. Ao amin'ny sary izay alefako, herintaona sy iray volana izy. '
Tsy alika madio ny Whoodle. Lakroa misy eo anelanelan'ny Terateran'ny Wheaten Tery malefaka ary ny Poodle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ho 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Mpanoratra International Canine Registry®= Whoodle
Drafitra mpamorona endrika = Sweatenpoo
Teagan the Whoodle (malefaka mifono kofehy malefaka ary mifangaro Poodle kely mahazatra.) - 'Ity i Teagan, eo amin'ny 6 volana eo ho eo. Manana ny toetran'ny reniny Poodle izy, tena mamy sy milamina. Diamonddoodles no niteraka azy. '
Ity dia alika kely Miniature Whoodle naterak'i Diamonddoodles.
Whoodle ho an'ny olon-dehibe (hybride Wheaten Terrier / Poodle hybrid), sary natolotry ny Mountain Summit
Samuel alika kely Whoodle mena teo amin'ny 7 volana teo ho eo, sary natolotry ny Mountain Summit
Dixon the Miniature Whoodle amin'ny taona 1
Pixie, alika kely Whoodle dia loko volondavenona fotsy tsy fahita firy. Sary natolotry ny Mountain Summit
Brodie the Whoodle amin'ny faha-5 taonany
Maggie amin'ny 7 herinandro
Wheaten / Poodle mix antsoina hoe Marley
Wheaten / Poodle mix (Whoodle) antsoina hoe Marley
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Whoodle
Sary Whoodle pejy 1
zanak'alika dane mainty sy fotsy lehibe
ohatrinona ny kisoa kibo vilany azo
chihuahua terrier afangaro mainty sy fotsy